तस्बिर : शिव भण्डारी
समाचार विश्लेषण :
लण्डन । बेलायतको नेपाली समुदायमा रहेका युवा तथा बालबालिकाहरुको प्रतिभा खोज्ने भन्दै आयोजित कार्यक्रम प्रतिभा नक्षत्रको दोस्रो संस्करण आइतबार लण्डनमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका लागि आयोजकले गरेको महिनौंदेखिको तयारी, प्रतियोगी बालबालिकाहरुले गरेको प्रशस्त मेहनत र अभ्यास स्पष्ट झल्किएपनि सञ्चालन र व्यवस्थापनको पक्ष निकै फितलो बनिदिदा कार्यक्रम समग्रमा खल्लो महसुस हुन पुग्यो ।
बेलायतमा जन्मिएका, यतै हुर्किएका बालबालिका समेतले नेपाली भाषा, संगीत र नृत्य लगायतका विविध विधामा गरेका मौलिक प्रस्तुतिहरु सांच्चीकै आकर्षक थिए । स-साना नानीहरुले हिमाल , सगरमाथा र गौतम बुद्धको नाम लिदैं नेपाली हुनुको गौरव स्टेजमा व्यक्त गरिरहंदा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि भएजस्तै महसुस हुन्थ्यो । तोते लवजमा उनीहरुले नमस्ते, धन्यवाद जस्ता शब्दहरु उच्चारण गरेको हेर्दा, सुन्दा कार्यक्रमको गरिमा उचो भएकै अनुभुति हुन्थ्यो । प्रतियोगी बालबालिकाहरुले नेपालको राष्ट्रिय गान प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्दा उपस्थित सहभागीहरुले पनि छाती चौडा पारेर साथ दिएका थिए ।
बेलायतमा रहेका नेपाली बालबालिकाहरुलाई नेपालसंग नजिक बनाउने, उनीहरुमा नेपालीपन र नेपाली मन बचाइराख्ने कार्यक्रमको लक्ष्य सांच्चीकै प्रशंसनीय थियो । बेलायत जस्तो अहिले नेपालीको दोस्रो पुस्ता हुर्किदै गरेको ठाउंमा यो खालका कार्यक्रम आवश्यक पनि छन् । जसले अहिलेको लागि मात्र नभएर दिर्घकालसम्मलाई पनि सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्छन् ।
कार्यक्रमको अवधारणा मात्र नभएर बालबालिकाहरुलाई नेपाली भाषा, संस्कार, संगीत, नृत्यसहित नेपालसंग सम्बन्धित विविध ज्ञानहरु सिकाउन आयोजकले गरेको कोशिस र बालबालिकाहरुले हासिल गरेको सिकाइ पनि प्रशंसाका लायक छन् । तर यसका बाबजुद कार्यक्रमको सञ्चालन र व्यवस्थापनको हिसाबले आयोजक पक्षबाट भएका कमजोरीहरुले भने कार्यक्रमलाई निकै खल्लो बनाउने काम गरेका छन् ।
कार्यक्रममा यस्ता धेरै पक्षहरु फितलो देखिए वा भए जहां आयोजक चुकेका छन् । तीमध्ये मुख्य पक्षहरु यहां प्रस्तुत छन् :
समयको कमजोर व्यवस्थापन
प्रतिभा नक्षत्र कार्यक्रमको सबैभन्दा कमजोर पक्ष समयको व्यवस्थापनमा देखियो । सांझ ५ बजेको लागि निर्धारित कार्यक्रम डेढ घण्टा ढिलो गरी साढे ६ बजे मात्र सुरु गरियो । कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु भएपछि अरु प्रस्तुतिहरुलाई छोट्याएर वा त्यहि अनुसार सञ्चालन गरेर समयमै कार्यक्रम सक्नेतर्फ पनि उनीहरुले कोशिस गरेनन् ।
सहभागीहरुलाई पट्यार लाग्ने गरी आसन ग्रहण र भाषण गराइएपछि प्रतियोगीहरुका प्रस्तुति देखाउने क्रममा पनि समयको प्रवाह गरेजस्तो देखिएन । बाल विधाका १६ र युवा विधाका १२ (१० उपस्थित) प्रतियोगीहरु पटक पटक गरी ३ राउण्डसम्म स्टेजमा आए । उनीहरुको परिचयदेखि मुख्य प्रतिभा प्रस्तुति र प्रश्नोत्तरका लागि फरक फरक चरणमा पालैपालो प्रतियोगीहरु स्टेजमा उतार्ने काम गरियो । २८ प्रतियोगीलाई तीन/ तीन राउण्डसम्म स्टेजमा उतार्ने कार्यक्रम बनाएर पनि साढे ६ बजेसम्म कार्यक्रम सुरु नगर्नु आयोजकको कमजोरी मात्र होइन, लापरवाहीकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
कार्यक्रमकी विशेष अतिथी तथा निर्णायक वरिष्ठ गायिका मिरा राणाले स्टेजमा गीत प्रस्तुत गरिरहंदा कार्यक्रमका लागि बुक गरेको समय सकियो भन्दै हलका सञ्चालकले 'पावर कट' गरिदिए । गायिका राणाले गाउंगाउंदै बीचमै छोड्नुपर्यो । केहि दर्शकले नेपालकी एक सम्मानित अग्रज गायिका अपमानित हुनुपरेको रुपमा बुझे ।
प्रतिभा नक्षत्रको गत वर्षकै कार्यक्रममा पनि यस्तै अबेर भएर हल सञ्चालकले पावर कट गरिदिएको सायद आयोजकले यसपटक पनि पावर काटिएपछि मात्रै सम्झिए । गत वर्ष त प्रतियोगिताको एक राउण्ड र रिजल्ट नै अर्को दिनमा सार्नुपरेको थियो । न त विगतबाट पाठ लिइयो, न हल सञ्चालकले केहि समय बांकी रहदा नै समय सकिन लाग्यो भनेर दिएको चेतावनीकै वास्ता गरियो ।
दिउंसोदेखि नै कार्यक्रमका लागि भनेर आएका, तयारी र प्रस्तुतिका क्रममा थाकेका, ५ वर्ष उमेरसम्मका साना बालबालिकाहरुलाई पर्खाएर मध्यरातसम्म राख्नु के आयोजकका विवेकले उचित ठानेको थियो ? प्रतियोगीहरुमध्ये कैयौं ५ वर्ष उमेरका बालबालिका थिए । स्कटल्याण्डबाट आएका केहि प्रतियोगीहरु कार्यक्रम सकेर सोमबारको स्कुल भेट्ने गरी घर फर्किने योजनामा थिए ।
कार्यक्रमको नतिजा सुनाउने कार्यमा भइरहेको ढिलाई पनि अस्वाभाविक लाग्थ्यो । निर्णायक मण्डलका सदस्यहरुले रिजल्ट आयोजकलाई बुझाइसकेको निकै बेरसम्म पनि आयोजकले रिजल्ट सुनाउन नसक्दा केहि प्रतियोगीका अभिभावकहरुले चासो व्यक्त गरेका भेटिए । प्रमाणपत्रमा नाम लेख्न होस् वा सबै निर्णायकले दिएको अंक जोड्नका लागि समय लागेको नै किन नहोस् । तर निर्णायकहरु रिजल्ट बुझाएर हिडिसकेपछि पनि आयोजकहरु रिजल्ट नसुनाएर जोडघटाउमै अलमल गरिरहेको दृश्यले प्रतियोगी वा उनका अभिभावकहरुमा अनावश्यक आशंका , प्रश्नहरु पैदा गरिदिन सक्छ ।
आसन र भासनको लर्को
धेरैजसो नेपाली संघसंस्थाका कार्यक्रमहरुमा देखिने आसन र भासणको ब्यथाबाट प्रतिभा नक्षेत्र अछुतो रहन सकेन । सहभागीहरुलाई पट्याएर लाग्ने गरी आसन ग्रहण गराइसकेपछि कार्यक्रमका सञ्चालकले भने, 'माफ गर्नुहोला , आसन ग्रहणका लागि ९० जनाका नाम लिनुपर्ने भएकाले अलिक समय लाग्यो ।'
आसन ग्रहणका नाममा अनावश्यक र असान्दर्भिक पात्रहरुको नाम भट्याएर समय खेर फाल्नु भन्दा कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाएको भए कमसेकम पावर कट हुनुअघि कार्यक्रम त सकिने थियो ।
भाषणको परम्परा पनि तोडिएन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथीको मन्तव्यको पालो आएको देखिएन । तर आयोजक समुहकै तर्फबाट बहुवक्ताहरुले लामो लामो भाषण गर्दै 'उस्तै उस्तै लाग्ने' खल्लो कुराहरु सुनाइरहे । कार्यक्रमका परिकल्पनाकारले 'पृथ्वीको शुद्धिकरण गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो' भन्ने निश्कर्षसहित राखेको लामो मन्तव्यको सन्दर्भ, आशय सायदै कसैले बुझे ।
निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सुरु भएको कार्यक्रममा समेत भाषणको लामो श्रंखला चलेपछि सहभागीहरुमध्ये कतिपय हलबाहिर निस्किएर भाषण सकिने समय पर्खिरहेका देखिन्थे ।
आसन ग्रहणका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ( एफएनजे) को प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका केहि त्यस्ता नामहरु पनि लिइयो जुन गलत थिए । एफएनजेमा आबद्ध नरहेका, पदाधिकारी समेतले नचिनेका त्यस्ता पात्रको नाम लिइंदा उपस्थित पत्रकारहरु नै अलमलमा परेका थिए ।
कार्यक्रमकी विशेष अतिथी तथा निर्णायक वरिष्ठ गायिका मिरा राणालाई 'वरिष्ठ गायक' भन्दै आसन ग्रहण गराइंदा पनि कार्यक्रमका दर्शकले असहज महसुस गरेका थिए ।
स्कटल्याण्डका प्रतियोगीको बिजोग ?
कार्यक्रममा बाल र युवा विधाका गरी कुल ५ प्रतियोगी स्कटल्याण्डबाट आएका थिए । ९ घण्टाको यात्रा गरेर लण्डन आइपुग्नुअघि आयोजकले उनीहरुलाई कार्यक्रम सांझ ८ बजे सकिने, लण्डनमा उनीहरुको लागि लजिंग, फुडिंगको व्यवस्था गरिने लगायतका आश्वासन दिएको उनीहरुले बताए ।
शनिबार सांझ लण्डन आएको ९ जनाको सो समुहलाई तीन तर्फ बांडेर राती अबेर सुत्नका लागि आयोजककै घर घर पुर्याइएको थियो । सिटिंग रुममा सोफामा सुतेर रात कटाएका उनीहरुमध्ये केहिले रातभर निद्रा नपरेको पनि सुनाए । अर्को दिन सांझ ८ बजे कार्यक्रम सकेर घर फर्किने योजनामा थिए उनीहरु , तर कार्यक्रम सकियो राती साढे १२ बजे । आफ्नै पहलमा चिनजानका आफन्त खोजेर राती २ बजे बास बस्न गएका उनीहरु भन्दै थिए, 'यस्तो हुन्छ भन्ने बुझेको भए आउने थिएनौं ।'
कार्यक्रममा देखिएका कहि कमजोर पक्षहरुको चर्चा गरिरहंदा कार्यक्रमको अवधारणा, यसको तयारीमा आयोजक समुहले गरेको मेहनत र प्रतियोगी बालबालिकाहरुले गरेका आकर्षक मौलिक प्रस्तुतिहरुको प्रशंसा पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । तर सुन्दा महान लाग्ने लक्ष्य अघि सारेर ठूलो प्रचार प्रसारसहित गरिने यस्ता कार्यक्रमहरुमा स साना कमजोरीहरुलाई सच्याउनेतर्फ ध्यान दिने कि नदिने ? समयको गलत व्यवस्थापनका कारण गत वर्ष समेत राम्रोसंग कार्यक्रम बिट मार्न नसकेको आयोजकले यसपटक पनि फेरि उहि गल्ती दोहोर्याउने ? कार्यक्रममा सहभागीहरु कसैले पनि अनावश्यक आसन र भाषण मन पराउंदैनन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि त्यसका लागि किन कोशिस नगर्ने ?
सन्दर्भ प्रतिभा नक्षत्रमा मात्र सिमित छैन । बेलायतका अधिकांश नेपाली संघसंस्थाले गर्ने कार्यक्रमको हविगत यस्तै हुन्छ । अब यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यस्तै स-सना कमजोरी र फितलो पक्षहरुले गर्दा महिनौंदेखि गरिएको ठूलो मेहनत र अरु राम्रा पक्षहरु पनि ओझेलमा पर्छन् भने कमजोरीहरु सुधार गर्नेतर्फ किन नलाग्ने ?